သင်္ဘောတွင်တစ်မြျှော, သမုဒ္ဒရာကိုကျော်ထွက်သွရှုသူတစ်ဦးသင်္ဘောသားယခင်ကရှိ၏။ သူကသင်္ဘောမြေယာချဉ်းကပ်လျှင်သူတွေ့မြင်နိုင်သည့်အတူမှန်ဘီလူးတရံနှင့်အတူတပ်ဆင်, အရွက်တိုင်ထိပ်ပေါ်မှာတောင်း၌ထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါအခိုးအငွေ့နှင့်မြူမကြာခဏသူတို့အဘို့အဦးတည်ခဲ့ကြသည်တိုင်းပြည်၏အကြမ်းဖျင်းကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့သောယေရှုကိုမုန်တိုင်းများမကြာခဏအမျက်ဒေါသနှင့်ပင်လယ်ရေကြမ်းတမ်းရှိရာအသက်တာ၏ပင်လယ်ပေါ်မှာလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံရရှိပါပြီ။ ဦးတည်ရာသည်မိုဃ်းကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျနော်တို့အကွာအဝေးအတွင်း glimpsed နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ယေရှုဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်လေယာဉ်မှူးဖြစ်ပြီး, အခါယာဉ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဆိပ်ကမ်းမြင့်လှိုင်းတံပိုးစမ်းသပ်နေသော်လည်း။
ကျမ်းစာကမွကွေီးထက်ပိုကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုသောသူသည်လူများ၏ပြောပြသည်။ ဟေဗြဲ၌တည်၏။ 11: 13-14, 16, ကျနော်တို့ကအကြောင်းဖတ်ပါ: အခနျးငယျ 13:
"ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်ဤကတိထားတော်ခဲ့ရာလက်ခံရရှိခြင်းမရှိဘဲသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ သူတို့ကပဲအကွာအဝေး၌မြင်ခြင်းနှင့်အထဲတွင်ယုံကြည်သည်နှင့်ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပြီးမြေကြီးပေါ်မှာသူစိမ်းများနှင့်ဘုရားဖူးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ "
အကွာအဝေးအတွက် - ဤလူနောက်ပိုင်းတွင်နှင့်အထက်သို့မြင်၏ဘုရားဖူးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအကွာအဝေးအတွင်းရှိကောင်းကင်မြေယာမြင်နှင့်၎င်းတို့၏ဇာတိမြေမဟုတ်ခဲ့မွကွေီးတိုင်းပြည်ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကွာအဝေးအတွင်းလွှမ်းမိုးနေတာတော့အမှန်ပါပဲသောကောင်းကင်ဘုံရှင်တည်း။ သူတို့သေဆုံးနိုင်သောကြောင့်, ဒါပေမယ့်သူတို့တောငျ့ပန်းတိုင်မရနိုင်ဘူး။ အခနျးငယျ 14:
ဒါကသူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းပြည်, သူတို့ကမှ လာ. တထက်ပိုကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာကောင်းကင်တိုင်းပြည်မှာထက်အခြားမည်သည့်တိုင်းပြည်ကိုမဆိုလိုနိုငျသညျ, သူတို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ သူ၏မိန့်ခွန်းများနှင့်မိမိအသက်ရဲ့အလုပ်အားဖြင့်သူတို့ကဒီကမ်ဘာပျေါတှငျသူစိမ်းဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အခနျးငယျ 16:
"ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ပိုကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်, ကောင်းကင်တဦးတည်းအလိုရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတစ်ဦးမြို့ထိုသူတို့အဘို့ပြင်ဆင်တော်မူသောကြောင့်, သူတို့၏ဘုရား ဟူ. ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်မဟုတ်ပါဘူး။ "
(ဟေဗြဲ။ 11:10) "သူသည်အဘယ်သူ၏ခိုင်ခံ့မြဲမြံသောဘုရားဖြစ်ရိုးအမြစ်ရှိပြီးသောမြို့အဘို့စောင့်ဆိုင်း" ။
"ဟုသူက expectantly နှင့်စိတ်ချလက်ချစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါသည်လို့ပဲ။ "